Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Europe inzvimbo yakanaka musangano dzakasiyana dzakawanda - uye culinary netsika. rudzi ose ine kuri pachena pachavo, izvo zvinokwezva vashanyi chaimo nhoroondo yaro uye nezvose rinopa. Uye mune dzimwe nyika, kuti kunorevawo huya hunenge zvinwiwa! Avo ve…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Isiri nguva refu pashure pokunge Channel Tunnel vakawanda vanotaura sezvo Eurostar Tunnel yakavhurwa 1994, zvakanga vaimudana mumwe Nomwe Wonders of Modern World. Maererano neAmerican Society of Civil Engineers, kuti zita zvakanga yakakodzerwa. Yakaisa iyo…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Panyaya kushanyira kuEurope misoro dzakakurumbira, London hadzina kwenzira dzose nzvimbo kuti chido mazita uye pane zvinhu zvakawanda zvokuita muLondon. Zvinofanira refu, nhoroondo dzakaitika; varipo dzakanaka uye zvinotyisa; uye kune zvakawanda zvezvinhu ku…